Meanings of အ အ အ အ အ အ အ အ အက အကင်း အကင်းတက် အကင်းပါး အကင်းသတ် အကင်းသေ အကစား အကတ်ကိုင် အကန့် အကန့်အသတ် အကန်း အကပ်
You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / အ
"အ" to "အကပ်"
အ, အ, အ, အ, အ, အ, အ, အ, အက, အကင်း, အကင်းတက်, အကင်းပါး, အကင်းသတ်, အကင်းသေ, အကစား, အကတ်ကိုင်, အကန့်, အကန့်အသတ်, အကန်း, အကပ်, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။
Results 1 - 20 of 4479
`အ`(အသံထွက်) (/a. (a̱)/)(ရင်းမြစ်) (ဝါစင်္ဂ) particle of negation အ အ(part) rare/ archaic# တားမြစ်ခြင်းပြသောစကားလုံး။#: အကိုတားမြစ်ခြင်းအနက်ဖြင်‌့အဖူးရစေစသည်ြဖင်‌့ ရှေးကရေးလေ့ရှိသည်။(=အရေအတွက်=
အင်္ဂလိပ်/Englishto one’s fill or satisfaction; to the point of satiation.
အင်္ဂလိပ်/English1(a)be dumb;(b)bedumbfounded. /2beadud. / beasimpleton. / be inert; not thrive;(b)be denatured; lose potency.(part) /2[fig] act as mediator. / (a) / be disproportionate; look stodgy.(adj)1 dumb. /2dud. /a/ 1 particle prefixed to verbs and adjectives to form nouns or adverbs. /2particle prefixed to numerical classifiers for tens or multiples of tens. / particle prefixed to replicated nouns or verbs to convey the idea of profusion. / particle used in combination with nouns for euphonic effect. / particle prefixed toacomponent part of some Myanmar names in order to deriveadiminutive form.
အင်္ဂလိပ်/Englishparticle prefixed to Pali and Sanscrit words and their derivatives beginning with consonants to denote negation.
အင်္ဂလိပ်/English1 the last letter of the Myanmalphabet. /2first in the set of twelve vowels traditionally taught in the learning of Myanmar language.
အင်္ဂလိပ်/English1 one serving in some capacity. /2house post. / chief; lord; lady. / (a)artisan; artiste;(b)vendor; dealer;(c)merchant [usually in compounds with the elision of အ]. [obs](a)man of wealth;(b)civilian taxpayer [living permanently inacertain locality]; commoner; indigenous person.
အင်္ဂလိပ်/English[arch & rare] particle prefixed to some words to effect negation.
အင်္ဂလိပ်/Englisheverything; all and sundry.
အင်္ဂလိပ်/Englishopening; mouth [ofacavity]; entrance.
`အက`(အသံထွက်) (/a̱ka./)(ရင်းမြစ်) gerund/ verbal noun က အ(part)+က(v) သီဆိုတီးမှုတ်သံတို့နှင့်တွဲဖက်၍ခေါင်း၊ ခါး၊ ြေခ၊ လက်စသည်တို့ကို ကြည့်ချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင်ညွတ်ကွေးဆန့်တန
`အကင်း`(အသံထွက်) (/a̱kin:/)(ရင်းမြစ်) attributive noun အကင်း အကင်း(n) အရိပ်အခြည်၊ အ‌ြေခအနေကိုသိတတ်ခြင်း။#: အရည်အချင်း၊ အကင်းသတ္တိပြည့်ဝလုံလောက်၍။ လောကုပ်။ ၁၄၀။(=အရေအတ
အင်္ဂလိပ်/English1 fruit in its earliest stages of develo ent. /2body temperature; heat. / fume. / potency; strength; sting. / shrewdness; astuteness.
`အကင်းတက်`(အသံထွက်) (/a̱kin: té/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb တက် အကင်း(n)+တက်(v) အနာရောဂါဖြစ်စေတတ်သည့်ဝမ်းတွင်းအခိုးအငွေ့များထကြွသည်။#: ရေနှင့်သွေး၍နဖူးတွင်အကင်းတက်၍ရောင်သ
အင်္ဂလိပ်/English(of body temperature) tise.
`အကင်းပါး`(အသံထွက်) (/a̱kin: pa:/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ပါး အကင်း(n)+ပါး(v) အရိပ်အခြည်ကိုနားလည်လွယ်သည်။#: ဉာဏ်ထက်မြက်၍အကင်းပါးသူလေးဖြစ်ရကား။ လမ်း။ ၁၉၉။(=အရေအတွက်
အင်္ဂလိပ်/Englishbe shrewd; be astute.
`အကင်းသတ်`(အသံထွက်) (/a̱kin: thá/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb (အခိုး)သတ် အကင်း(n)+သတ်(v) အခိုးအငွေ့၊ အရှိန်အစော်ပပျောက်စေသည်။#: အဆီကိုလည်းအကင်းသတ်ပြီးမှသာအသုံးပြုသည်။ စွယ်
အင်္ဂလိပ်/Englishdeodorize; deaden; denature.
`အကင်းသေ`(အသံထွက်) (/a̱kin: thei/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb အကင်းသေ အကင်း(n)+သေ(v) အနာရောဂါအခိုးအရှိန်ကုန်သည်။#: အနာအကင်းသေအောင်နှိမ်နေပုံကိုဆင်ခြင်ကာ။ ရှု၊ ၉၊ ၉၈။ ၁၀၃။
`အကစား`(အသံထွက်) (/a̱ga. za:/)(ရင်းမြစ်) gerund/ verbal noun ကစား အ(part)+ကစား(v) colloquial# ဖဲ၊ ကက်၊ ကြွေ၊ အန်စသည်ဖြင့်လောင်းကစားခြင်း။#: လေးကောင်ဂျင်အကစားမက်ခဲ့သဖြင့်စည်းစိမ်ပ
အင်္ဂလိပ်/English1 play; g es. /2g bling.
`အကတ်ကိုင်`(အသံထွက်) (/a̱ká kain/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) compound verb ကိုင် အကတ်(n)+ကိုင်(v) တစ်ဖက်သားကိုခက်ခဲအောင်လုပ်သည်။#: စကားအကတ်ကိုင်အ‌ြေခအတင်ပြောရာ၌ရွှေတောင်နန္ဒသူက ဦးတိုးထ
အင်္ဂလိပ်/Englishbe cussed; be uncooperative; be difficult.
`အကန့်`(အသံထွက်) (/a̱kan./)(ရင်းမြစ်) common noun အကန့် အ(part)+ကန့်(v) လှည်းပုံတောင်းနှင့်အကွပ်ကိုထောက်ကန်ထားသောအချောင်းအတံ။ ဒေါက်။#: အကန့်တို့သည်ပုံတောင်းနှင့်၎င်း၊ အက
အင်္ဂလိပ်/English1 partition. /2partitioned space; compartment; section; segment. / spoke ofacartwhell.
`အကန့်အသတ်`(အသံထွက်) (/a̱kan. a̱thá/)(ရင်းမြစ်) compound noun ကန့် အ(part)+ကန့်(v)+အ(part)+သတ်မှတ် - သတ်(v) ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားသောကာလ၊ အဆင်‌့၊ အတိုင်းအတာစသည်။#: ကမ္ဘာမှာပ
`အကန်း`(အသံထွက်) (/a̱kan:/)(ရင်းမြစ်) common noun ကန်း အ(part)+ကန်း(v) vulgar# မျက်စိအလင်းမရသူ။ မျက်မမြင်။#: အကန်းကတော့မမြင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့သူ့ခြေနှစ်ချောင်းက ကောင်းတဲ့အတွက်လမ်းတော့လ
`အကပ်`(အသံထွက်) (/a̱ká/)(ရင်းမြစ်) (my-verb) causative verb ကပ် အ(part)+ကပ်(v) ချဉ်းကပ်သည်။#: သင်္ဘောကမ်းကိုအကပ်တွင်သမ္ဗန်နှင့်တိုက်မိ၏။(=အရေအတွက်=) (=ကြောင်းတူသံကွဲမျာ
အင်္ဂလိပ်/English1 residue; leavings; dregs. / 2(a)person who is inaposition to dispense favour;(b)act of approaching someone to gain favour. / act of approaching sth.